Isehlukaniso - inhlekelele ethile wokuphila komkhaya, aphule kwezibopho zomshado. Yingakho kwenzeka? Ingabe sikugweme? Kanjani, futhi okubaluleke - kuyadingeka? Indlela ukusinda njani ngifake isahlukaniso?
Izizathu, izisusa, amafomu, amaphethini kanye nemiphumela kuzoxoxwa ngawo kulesi sihloko.
Isehlukaniso - nokonakala kwesibopho somshado. Futhi, kungakhathaliseki ukuthi sorry alivume, ezikhathini zanamuhla, lesi simanga - hhayi siyindlala. Ngenxa yalokhu, abalandeli yenchubomgomo olandelanayo ekuphileni phikisana ukuthi ilungiselelo lomkhaya kokulahlekelwa ukubaluleka kwayo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukuba ngokusemthethweni ndawonye uma kungekho uxhumano engokomoya? Isehlukaniso - kuba njalo eziyinkimbinkimbi futhi enezici ngokwahlukana ezivamile owakwakhe uxhuma ofanayo wokuphila wahlala, sokubhalisa umshado, ngezinye izikhathi - imali, izindlu, izingane.
Okuwukuphela kwendlela yokuphuma
Kuqondane ukuthi, ngemuva kwengxabano, umbhangqwana uqale ukucabanga ngesehlukaniso. Bacabanga ukuthi iyona kuphela indlela yokuphuma, ngenkathi ngokuphelele safinyelela isiphetho esingafanele. Ngaphezu kwalokho, akulona ikhambi. Uma imibhangqwana iyehlukanisa ngezizathu ezinye ngaphandle kwalezo ukungakwazi ukwakha ubudlelwano, awusebenzi, bese ngamunye wabo isimo iyaphindwa naye poslesleduyuschim elandelayo nokunye Ad Infinitum. Yiqiniso, wonke umuntu ongathanda yamukelwe uyini, holili futhi zaziswe, baziswa futhi waqonda. Kodwa ubuhlobo - kuba njalo usesho ebucayini kanye nezixazululo ezivamile. Emshadweni, sikhonjiswa ngokucacile ngaphezulu zonke.
Isimo sengqondo umphakathi
ESoviet Union, ilungiselelo lomshado futhi umndeni kwadingeka value. Isiqubulo se-"cell ongcono" emelelwa ngokucacile umbono womphakathi ngesehlukaniso. Abazi nje futhi kuyakhuthazwa, kodwa sebekubeke uyakulahla umphakathi. Ngo emashumini ambalwa, isimo sesishintshile kakhulu - ngisho amacala ezehlukaniso ngokuqondene ukwanda amacala ukwahluka owakwakhe lula. Ngaphambili, kwemvume esiyisibopho bobabili abahilelekile manje akubalulekile kangako, kwanele ukuba okungenani okukodwa isinyathelo.
Ngaphambi kokuba bashade, lowo kwakuhlukile
Abantu abasanda kushada bavame ukuhluleka amaqiniso okuphila. Ngemva komshado, ngokungazelelwe kuvela ukuthi zonke amaphupho wami ubuyingxenye okulindele ezahlukene futhi engenabulungisa ngokuphelele. Yingakho imibhangqwana eminingi kokuhlukanisa emva ezinhlanu, ezintathu, noma ngisho unyaka owodwa womshado, abakwazi ukulinda aze "pritrutsya 'komunye nomunye. Izinhlamvu avele ekuphileni kwansuku zonke nzima futhi libukhali, ngaphezulu zibonakala ngokucacile nemibi. Isinqumo kubonakala ahlukanise. Izimbangela Nezingozi imiphumela ngazimbili enjalo ihlale ifana: washesha, bese kwadingeka ukuba akhumule izibuko rose-ezinemibala, kodwa ngokuzayo kufanele uqaphe ngokwengeziwe.
Futhi ngezinye izikhathi noHezekeli - bahlala ndawonye iminyaka eminingi, kanye izinto eziningi lutholwa, izingane ekhula waqala ukwakha impilo yakhe, nomkakhe, ubuka nomunye, ungazizwa imfudumalo nothando ayengaphansi. Imizwa eyake yanyamalala unomphela. Ukuphikisana phakathi umbhangqwana oshadile abe mubi nakakhulu, futhi kuphakama umbuzo: ukuze alondoloze lokho okuncane ishiywa, noma kufayela sesehlukaniso? Izizathu isigaba, imiphumela awanasithakazelo, zingabantu nje omunye usekhathele yini omunye. Futhi aphule phansi nomunye. Umndeni? On the iminwe babe izindandatho, kodwa anginaye umndeni.
Isehlukaniso - lena ukuphela kwendaba. Ngenxa ibizwa ngokuthi sokugcina, lapho ukusindisa umshado akunakwenzeka. Yingakho isehlukaniso ngamawala, ngaphandle ukuxoxa futhi ngaphandle kokucabanga kahle - hhayi ukhetho best. Kodwa ngokuvamile kwenza kanje: umbhangqwana yokuma bonke ubuhlobo, ngokusemthethweni esishoyo ukuthi zingabantu omunye komunye - akukho, kodwa isizathu salokhu awazi bona.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani isinqumo sokugcina, ekugcineni kwahlaluka ukuthi isehlukaniso. Izimbangela isehlukaniso kanye nemibandela ukuzinza umshado - izinto kuhlobene. Zimelela base. Uma umlingani ngayine inezidingo zayo "ingxenye" yayo iye akhethiwe umbhangqwana oshadile. Lokhu kwaba isizathu. Ngakho kufanele, futhi ibenze kude kuze kube phakade.
Hhayi lo muntu
Kuyiphutha ukucabanga ukuthi omunye wakhethwa "Awuyona yini indoda", futhi manje sidinga ukulungisa ephelele, afake isehlukaniso. Emva ukukhetha senziwa ngenhloso. Imizwa enamandla noma pragmatic ukubala - ongakhetha ngisho engaphezu kwemibili, kodwa uma le isehlukaniso - ngomzamo ukubaleka umthwalo isinqumo sabo, kulindeleke umphumela oyoziletha.
Uhlangothi impahla mayelana nodaba
Phakathi ibinzana loluhlelekile "okungenakulungiswa" njengoba imbangela isehlukaniso ngokuvamile kuyasetshenzelwa eningi nakakhulu, yingakho mehluko ngokuvamile kwakufanele futhi kungani waqala ukuthuthukisa. Ngokwezibalo, amaphesenti amabili izehlukaniso enzeka enhlabathini ubumpofu. Ukucindezeleka ngenxa ukungakwazi bobabili kwabashadile uphume ezikweletini inyuka, nokubonisa noma iyiphi imizwa ngaphandle ubudlova akunandawo. Uma umndeni unezingane bonke iyovele ibhebhetheke.
isikhala ephilayo Wabelane
Lapho lo mbhangqwana kungekho izindlu ehlukile futhi uphoqelekile ukuba axazulule ngaphansi kophahla lwabazali bakhe, kungase futhi kubangele isahlukaniso ekuseni. Izizathu, izisusa kanye nezinto esiteji imiphumela kulesi simo uwedwa. Ngokuba ukuthuthukiswa kwe-zingqubuzana izihlobo ezikhulile, eqinisweni, nomunye wakhe omndeni angaphezu ezimisiwe imithetho, lokho umalokazana umthetho, noma akafuni ukuba sibekezelele, kuthatha akukho kuka iminyaka emibili. Futhi uma ubona abashadayo emizini yabo, phakathi nesikhathi esifushane iyunithi elincane umphakathi zibhidlike ngaphandle siphawula unyaka wayo yesihlanu.
Lokhu kungenxa yokuthi abantu asebebadala ivame ukulawula izimpilo abasebasha, kuyilapho abasha ozama ukwakha ngokwakho. Omunye abalingani idabukile phakathi uhlangothi kube: abazali noma umkakho (umyeni wakho).
izimbangela kwenqondo yesehlukaniso - kukhona izimpawu bebonke ngokuthi "imizwa washintsha." Imikhuba ngaphambilini utsintsa, uqale ukucasula, futhi ngayinye nemiphumela ethile engathandeki eziyela ukuthi lo mbhangqwana - hhayi ambalwa, kanye namanga okuqinile. Kungaba ukulahlekelwa nemizwa yothando, umhawu ezikwenza uphelelwe isineke, ukungavumelani ngokuya kobulili, noma nemibono engafani ezindabeni zokuphila, akuvumeli kuya phambili ukwakha noma iyiphi izinhlelo ndawonye. Kufanele kuqondwe ukuthi umshado - kuyinto Fusion abantu ababili abaphikisanayo ivumelane ne self-ukuthuthukiswa kanye nenqubekela phambili ndawonye.
Iphuzu lwezenhlalo umbono
Isehlukaniso izimbangela nemiphumela kwabantu kubhekwe ngokuya umphakathi, ngaphandle kokuya ubudlelwano siqu zomuntu siqu. Injongo yalo - ukumambula ukubaluleka kuqedwa umshado emphakathini.
Isehlukaniso njengoba abaningi abanawo linencazelo double. Ngakolunye uhlangothi, kunzima ukuphikisa yokuthi isehlukaniso - ke alivumi. Phela, ukubhujiswa sikhungo umndeni. Ngakolunye - umphakathi onesithakazelo eqinisweni ukuthi "ingqamuzana" emphakathini ukuze ube nempilo futhi ephephile, uma intuthuko engokomoya wonke amalungu omkhaya, lokho kukhinyabeza ngqo emfundweni yezingane - esizukulwaneni sesikhathi esizayo. Yini singaphetha ngokuthi buhlanjululwe, ngokuba ebucayini owakwakhe ezimbili abakwazi ngaphezulu ukushada nomunye, onezici omuhle umphakathi futhi ngezinga elithile ngabo.
indima Social njengoba kuthonya isehlukaniso
Izimbangela nemiphumela yesehlukaniso kungenzeka ingabi ngabanye. Kodwa phakathi kwabo kukhona isigaba okuthiwa izimbangela kokuziphatha. Bahlanganisa izinga engamukeleki ka omunye abashadayo. Ngokombono lwezenhlalo umbono, kuba ukungakwazi uzame phezu Indima yomfazi noma umyeni.
Lapho indoda ishada, kufanele kube khona ngengqondo ukulungele salokhu. Ngo kwabantu, kukhona into enjalo - "indima social": kuba ukuziphatha olulindelekile lomuntu elihambisana isimo salo. Ngemva komshado, intombazane ithola indima lowo mfazi guy - indoda, futhi lokho kusho ukuthi, uma kungenzeka omunye wabo akakwazi ukubhekana kangcono nale nkinga, umshado awe bhú phansi.
isinqumo amahlazo izinkinga kunokuba zezingxonxo ezakhayo;
ukungakwazi ukusabalalisa isabelomali umndeni;
Ukwahlukana abangenalo okungenasisekelo;
alcoholates noma ukuba umlutha we omunye umbhangqwana;
izenzo ezingekho emthethweni.
Indlela ukusinda njani ngifake isahlukaniso?
Ngezinye izikhathi ngaphandle isehlukaniso nganoma iyiphi indlela. Futhi umbuzo wokuthi lena kuphela indlela yokuphuma, impendulo inguyebo kuphela. Kodwa ngisho noma isehlukaniso isinqumo mutual umbhangqwana uye wakwazi ngaphandle izingxabano, eziyihlazo zokufumbathiswa ekubhaxabulweni amapuleti, kokuhlukana umlingani wakhe wangaphambili, zivalelisa engxenyeni yena, nezwe lakhe, indlela yokuphila yesikhathi esidlule - kunzima. Isehlukaniso (izimbangela, izigaba, imiphumela) - kubaluleke kangaka lapho selenzeka? Kodwa ngokuqinisekile uthi: waxwayisa - kusho ahlomile. Ngo nemiphumela yesehlukaniso has isigaba lalo.
Isigaba isipiliyoni isehlukaniso
Odokotela bengqondo ukuhlukanisa izigaba ezine isipiliyoni isehlukaniso. Isikhathi esibekiwe lezi kunalokho ezivamile, omunye umusho owodwa zingase zephuze, azihlanganise nabanye, nokunye. Kodwa ngokuya ngokuthi umuntu esiteji, amathiphu ingase ibe kancane ehlukene.
"Kunzima ukukholelwa" - leyo nkulumo echaza kulomkhakha. Njengoba njalo emva ushintsho olukhulu, umuntu angeke ngokushesha bakwemukele lokho okwenzeka. Ukuvuka ekuseni, sinalo sizikhumbuze ukuthi kwenzekani, ngandlela-thile okubhekana nayo. Ngashaqeka ingahlala kwamaminithi ambalwa, futhi kuthathe izinyanga ezimbalwa kuphela. Kodwa evamile isikhathi ifreyimu - kusukela izinsuku eziyishumi nambili. Odokotela bengqondo ukweluleka hhayi onkom 'idla yodwa, hhayi ukufihla imizwa, ukukhuluma nomndeni nabangane, hhayi ukulahla bakusekele.
I bacindezeleke isigaba
Kuleli qophelo, uqale ukuhlupheka bayazi sihlala ayisishiyagalolunye amasonto. Lapho ukholelwa ngesehlukaniso namanje ehluleka, umuntu ewela isizungu sakhe samanje, ukwesaba ngekusasa, ukuzisiza. Umuzwa Kunjengokungathi kusukela ngaphansi kwezinyawo zakhe washiya phansi. Reliance kwaba - futhi manje akusiyo. Okusho ukuthi yathathwa, angabuyeli, esikhundleni sakhe - tangle eziphikisanayo ekhanda inhliziyo.
Kuba lula uma ubuka it kusukela ngaphandle. Ngakho, kudingeka uxoxe kabanzi, bakwazi ukuxoxa ngalesi simo nomuntu, zama ikhefu kancane kuze kube imizwa kungukuthi washayiseka futhi ubuhlungu futhi unecala kungukuthi exutshwe badideke nentukuthelo.
Uma uya ku-ukucindezeleka futhi onkom 'idla yodwa, lokho kuyoholela self-ukubhujiswa, kanye nesidingo ephambene - ukuthola amandla okuqhubeka ephila, sengihlela ukumbamba incazelo entsha.
Awukwazi ukugxila kulokho engikufundayo kuphela okuhlangenwe nakho kwabo. Uma umndeni unezingane - liphinde akulula futhi umsebenzi abazali, siqala buhlanjululwe, sibaqinisekise, ukusiza ukuzivumelanisa nezwe egcwele engavamile.
Lesi sigaba ingahlala isikhathi esingangonyaka ngemva kwesehlukaniso. Isiteji kuzibonakalisa hhayi ukuhlupheka okwathatha isikhathi eside kangako, kodwa esifushane izinxushunxushu ngokomzwelo izithombe Imininingwane, ozithola okungahleliwe kanye nezinsuku lowo mbhangqwana ukugubha ndawonye, futhi manje base akudingeki lutho.
abangane Common kanye namasiko abantu abashadile kuphela uyazi, ukwenza ubuhlungu inhliziyo njengokungathi wanamathela inaliti blunt. Indoda ecabanga njalo ngesahlukaniso yakhe, kodwa futhi akhohlwe ngokuphelele naye ehluleka, khulukhulu lokha ayilungele ukuhlangabezana ubuso nobuso izinguquko, njengoba ayifice ngokuzumayo.
Wokugcina, Esigabeni sokugcina iqala endaweni ethile ngonyaka. Intaba uya uphelelwa amandla, endaweni yayo kufika ukudabuka.
Isikhathi selapha - futhi lokhu kuyiqiniso. Kuwo lo nyaka, kufanele lamukele iqiniso lokuthi ukuphila kuyaqhubeka, futhi siphile ngandlela-thile kunesidingo. Yenza abangane abasha futhi uhlangane nabangani, ukuthuthukisa kanye nenqubekela phambili, ukukhulisa izingane steadfastly thatha nosizi lwabo ikusasa. Bobabili nabo injabulo ngezinye izikhathi ine ukuhlangabezana wedwa - futhi indoda uyazi ke, uba Ifunda abakujwayele.
Kutholwa ukuzethemba. kukhona isidingo ebuhlotsheni obusha omunye umuntu kweminyaka embalwa, ukuzimisela ukuhlangabezana uthando.
ukuphila Okugcwele iqala lapho ubuhlungu usuthathelwa bathemba, esidlule akusho ukudonsa emva kwakhe, ihlala lapho kufanele - kude ngemuva, ngenkathi ngaphambili, ngakolunye uhlangothi, elinde ekugcwalisekeni nokusentshenziswa kwe-imigomo nezifiso. Uma umuntu usulungile ukubona ukukhanya okulokozayo - nguye ulungele ukuhamba.
Indlela unquma ukufaka isehlukaniso, lapho umkhaya akuseyona kungenzeka ukuba alondoloze
Sivumelwano Global ku ukuhlukaniswa kwempahla ka abashadayo kanye inkontileka umshado.
Juni 25: uphawu Zodiac - Cancer
Dish "Isidleke Swallow sika", iresiphi
I inyamazane encane kunazo zonke emhlabeni. Antelope dik-dik: incazelo, isithombe
Lada: iresiphi ngezithombe. amaswidi Eastern
Indochina: iphi Vietnam?
Yeka ukuthi okumnandi kanjani ukunambitha inyama epanini lokuthosa: amathiphu
Antarctica kwatholakala eviyweni, eliholwa wabahloli Bellingshausen futhi Lazarev. Umlando kwatholakala Antarctica
Indlela ukhetha ibhodi ayina, futhi yini okufanele unake?
Umlando trigonometry: ukuvela nokuthuthukiswa
Dmitry Grachev - comedy umlingisi
Nibiru futhi ukuvela Impucuko Human
Alexander Belov, basketball: Biography, ezemidlalo impumelelo, imbangela yokufa